Teccart College | BLI Zvikoro zvemitauro muCanada
Zvirongwa zvePathwayTeccart Koreji
Nzira yako yekuCanadaTeccart Koreji
Teccart Institute kambani yakazvimiririra kukoreji inopa zvirongwa zvakanaka mukudzidzisa kwehunyanzvi pakoreji uye yave ichishanda muQuebec kwemakore anopfuura makumi matanhatu. Simba rayo rekutanga riri mune idzva ruzivo uye kutaurirana matekinoroji (NICT) uye maindasitiri emagetsi engineering tekinoroji zvikamu. Zvirongwa izvi zvinotungamira kuDEC uye / kana AEC.
Iko kunaka kwakazivikanwa kwekudzidziswa kunopihwa kuTeccart Institute kwakavakirwa pakudzidzira kwehunyanzvi, hwakasanganiswa nedzidzo yakajairidzwa yakatemwa nzira yekuvimbisa kubudirira pakudzidza uye kubatanidzwa.
Teccart KorejiMamwe mashoko
BLI yeChirungu level 8 kana BLI French level 8
Iwo makuru mabasa eindasitiri emagetsi emagetsi matekinari ari kugadzirisa dambudziko, kudzivirira kuchengetedza, kuiswa uye kutumira kwemidziyo mumatanho ekugadzirisa masystem. Mukubatana neinjiniya, ivo zvakare vanobatanidzwa mukugadzirwa kana kushandurwa kwemaitiro emishini kana kuiswa kwemagetsi. Ivo vane zvakare mutoro wekutenga kwemidziyo mukati memiganhu yebhajeti.
Tarisa uone mashandisirwo ezvigadzirwa zvikuru uye zvishandiso zvinoshandiswa kudzora nekuita mashandiro emaindasitiri maitiro uye ita calibration, kugadzirisa uye chirongwa; dhizaina machira kumabhizimusi zviyero, shandura uye kutora chikamu mukugadzirwa kwemasisitimu ezve otomatiki; kuisa, kugadzirisa matambudziko, kugadzirisa uye kuchengetedza michina zvakachengeteka uye maindasitiri masisitimu ekugadzira, kutakurwa, kugovera, kutonga kwesimba remagetsi uye kushandurwa kwayo kuita basa rekutyaira, uye izvo zvemagetsi zvemhando, pneumatic, hydraulic kana elekitirodhiya yashandiswa kuyerwa, kudzora nekuita mashandiro eindasitiri. maitiro.
Iyo Computer Management chirongwa inotarisira kudzidzisa vadzidzi kuti vadzidze basa rehurongwa-muongorori mumunda we maneja.
Mukuita kwehunyanzvi hwake, mupepeti-muongorori anosangana nguva zhinji nemamiriro ezvinhu matsva anobva kuhumiro hwemabasa erudzi rweiyo IT nzvimbo, tsika nemabhizimusi maitiro, nezvimwe .. Naizvozvo, iye / iye anofanira kuratidza chinja. kudzidza uye kugona kugadzirisa matambudziko.
Uye zvakare, kuongororwa uye kuita chirongwa chebasa kunoda kunyanya iwo mweya wepfungwa, kuongorora uye kuumbwa. Iye zvakare anofanirwa kuratidza kuzvimiririra, kugona basa, kutsungirira uye kunyatsoziva nezvekuvandudzwa kwetekinoroji.
Izvi hazvitauri kuti mubato webasa nenzira yemapurojekiti, kunyanya mumhando yemakomputa inosarudzwa inoda kuti mupepeti-muongorori kugona hunyanzvi hune chekuita nekutaura, kushandira pamwe uye hunyanzvi hwekudyidzana.
Iyo Programmer Muongorori inofanirwa kusangana nezvinodiwa zvemakambani nemabasa akasiyana siyana. Iye / iye anokwanisa kushandira makambani ane iwo mao IT department anogadzira software kana inopa IT masevhisi. Iko kuvandudza kwezvikumbiro zvinosangana nezvinodiwa zvemabhizinesi madiki, epakati uye mahombe mukukura kuchiri mumwe wevashandisi vakuru vevashandisi vehurongwa hwekuongorora. Nekudaro, nekuda kwekuvhurwa kwemisika, kungogara kuenderera kwetekinoroji nyowani uye kuwedzera kukosha kweruzivo nekutaurirana, ino nzvimbo iri kuita shanduko dzakakosha. Ivo vanoratidzwa kunyanya nekuwedzera kusiyanisa uye, nekuda kweizvozvo, yakanyanya kudiwa yezvigadzirwa zvitsva. Izvi zvigadzirwa zvitsva zvinosanganisira kutaudzana manyorerwo seyerubatsiro kubasa reboka (intra-kambani), zvishandiso zvinogonesa kuchinjanisa dhata (pakati-kambani) uye kutumirwa kweRuzivo Highway muzvirongwa zvakasiyana, kunyanya mukutengeserana. Izvi zvitsva zvinoshandiswa zvine hunhu hwakasiyana: hushamwari, kupatsirana uye multimedia. Muongorori wechirongwa uyu anotarisirwa kubatsira mukuvandudza mashandisirwo emakomputa anosanganisira izvi zvinhu.
Mabasa anoitwa naiye programmer-muongorori anogona:
inosiyana zvichienderana nemakambani maitiro akaita nemhando yebhizimusi rayo uye nehukuru hwayo, sezvo mabhizinesi mazhinji ari madiki kana ari mashoma-pakati, muongorori-muongorori anofanirwa kuita zvinoenderana;
gadzirisa chero nhanho yedanho rekuvandudza kwechishandiso, ndiko kuti, kuongororwa uye kugadzirwa, kuita uye kuyedza pamwe nekuisirwa uye kubatanidzwa mune inotarisirwa nharaunda komputa. Iko kugadzirwa kwemagwaro uye kudzidzisa kwevashandisi zvakare chikamu chemabasa evanoongorora chirongwa;
chengetedza iripo software nekuunza anoshanda ekuvandudza. Iye / iye zvakare anoshanda sehunyanzvi nevashandisi;
ita mabasa ane chekuita nekushanda kwemakomputa emakomputa senge kuisirwa nekugadziriswa kwemahara, mabasa akareruka ekutarisira padiki diki network nemabasa ekutsigira ehunyanzvi.
Ivo vakapedza kudzidza neTerekuta zvinowanzo kuwanikwa pakati pevagadziri vekufambisa michina, nemakambani anopa mabasa ekufonera, terevhizheni yemuchina, pamwe nezvekutengesa nekutengesa zvigadzirwa zvemagetsi. Mabasa makuru eaya mahunyanzvi matekinoroita kuisa, kuyedza, kugadzirisa uye kugadzirisa zvigadzirwa zvepasi rese rezivo neruzivo. Muzviitiko zvakawanda, ivo vanoshandawo nerubatsiro rwehunyanzvi nekumiririra.
Mahunyanzvi matekinoroji mune ino chikamu anofanirwa kuisa uye kugadzirisa IP uye VOIP network, dhiza dhizaini uye gadzira mudziyo uchishandisa maindasitiri maitiro. Isa, chengetedza uye shandura zvigadzirwa zvemagetsi zvinoshandiswa kutakura, kurongedza kana kushandura zviratidzo zveAnalog kana dijitari zvinoshandiswa zvakanyanya mumunda wekutaurirana. Kuongorora uye kugadzirisa matambudziko ekukurukurirana mafoni pamagetsi akanyanya kune IP inogara nzvimbo (DOCSIS ADSL) uchishandisa zvakakodzera nyanzvi yekushandisa. Uye zvakare, chirongwa ichi chinotendera mudzidzi kuwana hunyanzvi hunodiwa pakugadzirira kweCCNA neCVOICE Cisco.
Iyo nzira yehunyanzvi Computer Networks Management inovavarira kudzidzisa vadzidzi kudzidzira basa remaneja emakomputa network.
Pakupera kwake / kwake maneja maneja anozogona kushandisa nzira yealgorithmic, kuongorora aratidziro yekomputa kweneti, kusarudza zvinhu zvemuviri, kuwaridza mashandiro ehurongwa hwekushanda hwepamhepo yekushandira, kuve nechokwadi chekuchengetedza. yezvinhu zvemuviri uye zvine musoro zvekombiyuta network yekugadzirisa zvishandiso zvemakomputa, kutarisa mashandiro ekomputauta, kusarudza software, kutarisira nguva yake uye kunaka kwebasa rake rekuona kuti vatengi vatsigire komputa network, kuona shanduko yecomputer network kuvandudza zvinoshandiswa, kuongorora uye kugadzirisa makompiyuta network yekuisa server; kuita matekinoroji uye masevhisi akanangana neInternet; kuronga kuiswa kwecomputer network yekushandisa komputa yeti komputa kutonga komputa network.
3D YEMAHARA DZIDZO
Chirongwa ichi chinogadzirira vadzidzi basa mu 3D makomputa mifananidzo yemifananidzo uye makompiyuta mifananidzo. Vanhu ava vanonyanya kushanda mumasiropu enopopoma nekomputa (pfupi uye refu terevhizheni) pamwe nemakambani anoshanda mukugadzira multimedia, mitambo yemagetsi, kuproduction uye zvimwe zvakakosha. Ivo vanowanikwawo mumaindasitiri ekugadzira mafekitori uye pakati pevagadziri ve software uye muminda dzakasiyana-siyana semushonga, geomatics, aerospace uye yakakwirira fashoni.
Iwo magrafiki ekugadzira mumifananidzo ye3D uye mifananidzo yemakomputa inotanga kuongorora maitiro eprojekiti akaendeswa kwavari. Ivo vanobva vaburitsa prototype yemufananidzo, vachiita modhi graphical zvinhu (mavara, zvinhu uye zvakatipoteredza), vanoshandisa mavara nemavara, kumisa mwenje, mifananidzo inoratidzwa, uye kuita mukukudziridza kwekupedzisira kunopa kunopa. Ivo zvakare vanogadzira edhijitari ekuona mhedzisiro uye kuita compositing (kuumbika).
Basa revanyanzvi mune 3D animation uye CGI inosanganisira kuvandudza kwehunyanzvi, vanoona acuity uye hwakasimba munzira dzebasa, pamwe neruzivo rwekufamba uye kutonga matekinoroji uye echinyakare maturusi ekugadzira uye komputa.Inyanzvi mune 3D animation inonzi kusika mifananidzo uye yekuenzanisa iyo inogona kushandiswa kune zvinoshanda zvinoshandiswa uye zvigadzirwa zvinobuda. Iyo inopedza kudzidza mune ye3 animation uye mufananidzo synthesis unokwanisa kubatanidza timu ye multidisciplinary. Zvinogona kudikanwa kuti ushande munzvimbo dzakadai semitambo yemavhidhiyo, multimedia inoshanda, kutumira-kusimudzira uye mhedzisiro yakakosha inoshandiswa kumunda wekushambadza, terevhizheni, firimu uye hunyanzvi. Pamusoro pezvo, anogona kushandirwa muindasitiri yehunyanzvi hwekufungidzira inoshandiswa kune nzvimbo dzakadai sekuvaka, kugadzirwa kwemaindasitiri, zvekufungidzira zvekurapa, ndege dzinofamba nekufamba uye pamwe nekudzidziswa.
Iye anopedza kudzidza mune ye3 animation uye mufananidzo synthesis anoongorora maitiro epurojekiti, achigadzira pfungwa uye nyaya yakanyorwa. Iye / iye anofanidza zvinhu, nzvimbo uye mavara uye ehupenyu. Pakupedzisira, inoshandisa mifananidzo uye inoratidzira inoteedzana uye inosanganisa ese mune 3D kugadzirwa.
Iyo inopedza kudzidza mune ye3 animation uye makompiyuta mifananidzo yakagadzira maonero ayo uye pfungwa yekutarisa. Iye / iye anogadzira uye ane hunyanzvi mukugadzirwa kwemapurojekiti. Iye / iye akasimba munzira dzayo dzekushandisa, iye akavhurika kutsoropodza uye akazvimirira. Iye / iye ane ruzivo rwakakodzera rwekufamba uye kugona kuturikira maratidziro anehupenyu. Iye / iye anokwanisa hunyanzvi uye maturusi ekugadzirwa kwemakomputa. Iye / iye anocherekedza tekinoroji domain kuti achengete kusvika parizvino ruzivo. Iye / iye anokwanisa kushanda nevamwe kuti vagone kugadzira uye kuita zvinhu zvakasiyana siyana zve 3D kugadzirwa uye kuzvisanganisa nazvo zvakabatana zvese.
Pakupedzisira, uyo anopedza kudzidza mu3D animation uye mufananidzo synthesis anoratidza mweya wakaomesesa uye anoratidza kuongorora, kududzira uye kuongorora kugona. Iye / iye anoziva enzanisa, gadzira mabhaisikopu, funganisa uye gadzirisa matambudziko nekupindura dzimwe nzira. Iye / anotaura achinyemwerera mune zvakanyorwa uye zvinotaurwa chiFrench, uye anoratidza kunzwisisa kwakanaka kwechirungu. Iye / iye ane hutsika hwakasimba munhau, kutaurirana uye hunyanzvi kazhinji, uye anoratidza hutsika hunhu, kupindura nekuita pachena kune nyika.
FASHION KUSVIRA | AEC | Maawa gumi nemashanu
Fashoni Kushambadzira inokosha chikamu cheCanada hupfumi uye inoisa nzira yehuwandu hwemikana yebasa ingave iri kutenga zvigadzirwa zvemafashoni, kuvandudza zvigadzirwa, kutengesa, kutengesa kutengesa, kushanda, bhizinesi, kuronga kana kutsigira kwekutengesa.
Iyo Fashoni yekushambadzira chirongwa chakagadzirirwa kudzidzisa vatambi vane hunyanzvi mubhizinesi manejimendi, kutengesa uye kugadzira zvigadzirwa. Kudzidziswa kunotarisana nekusimudzira kwehunyanzvi hune hukama neindasitiri yemafashoni, hunyanzvi hwekushamwaridzana, hutungamiri, kushanduka uye kusimudzira kwehunyanzvi hwehunyanzvi.
Koreji iyi inokumbira vadzidzi kuti vanyatsogona mutauro weindasitiri iyi. Maitiro ehurongwa hwakadaro kuti mudzidzi aongorore uye aongorore mazano matsva, adzidze maitiro ekutengesa mafashoni pamwe nekudzidza kubata uye kugovera zvigadzirwa zvemafashoni.
ZVINHU ZVINOGONA | AEC | Mwedzi 19 (kusanganisira kudzidza mukati)
Yemukati dhizaini munda wekugadzira une zvakawanda zvinonetsa zvehunyanzvi. Chirongwa chekoreji chakakwanira vanhu vane pfungwa yakanaka yekuziva inoyevedza yekutarisira kushandiswa kwenzvimbo dzakavakirwa. Ndichiri kudzidza zvakasiyana nezvechirango, vadzidzi vanokudziridza hunyanzvi uye matarenda emhizha kuti vakwanise kuronga mapurojekiti ese, kungave kwekugara kana kwekutengesa. Chirongwa ichi zvakare chinopa makosi mu AutoCAD uye 3D Studio Max (komputa yakabatsira dhizaini) kuitira kuti vadzidzi vakanyatsogadziriswa kubata zvigadzirwa zvehunyanzvi muindastiri. Chikoro chedu chinokudziridza hunyanzvi uye kugona kwevadzidzi kwezvinhu zvese zvemukati mekugadzira.
Panopera kosi, vadzidzi vanozokwanisa kunzwisisa izvo zvinodiwa nemutengi mune zvemukati nzvimbo kuronga, dhizaini zvigadzirwa, dhizaini uye kuronga nzvimbo mukati yakavakirwa maererano akasarudzwa mhinduro uye zvinoenderana nemakodhi, kuraira nezvesarudzo mavara, zvigadzirwa, fenicha uye shuwa kuitiswa kweiyo projekiti maererano nezvirongwa uye zvakatemwa.
Iyo indasitiri yemafashoni inzvimbo inodikanwa iyo inoona kugona. Vagadziri vanofanirwa kuve nehunyanzvi hwekuziva aesthetics uye kuremekedza mitemo yemusika. Chikoro chedu chinopa chirongwa chekoreji mukugadzirwa kwemafashoni chinoita kuti vadzidzi vakwanise kuvandudza hunyanzvi hwekuita hunyanzvi nehunyanzvi hwekuita basa muindasitiri inosimbisa uye inonakidza. Kunze kwekukudziridza chimiro chake, iko kudzidziswa kunozoita kuti akapedza kudzidza awone uye kududzira maitiro kuti akudziridze maitiro matsva. Chirongwa ichi chinosanganisirawo makosi ePAD System, Photoshop uye Illustrator software uye Dhizaina mamodhi, zvichibvumira mudzidzi kushanda nehunyanzvi hwekugadzira mafashoni. Chinangwa chechimiro chefashoni chirongwa ndechekudzidzisa vanogadzira fashoni yevakadzi basa ravo nderekugadzira zvipfeko zvemhando yepamusoro uye kugadzira masitayipi kana dhizaini yezvipfeko zvinoratidza maitiro emafashoni pamwe nezvinodiwa zvemisika dzakasiyana siyana. Mugadziri wefashoni anofanirwa kuita tsvagiridzo pazvinhu zvinoshandiswa, kutarisisa kuitiswa kwemaitiro uye kugadzirwa kwemaproteni uye kuve nechokwadi chekusimudzira.
Chirongwa ichi chinoda kuzadzisa zvinotevera zvinangwa:
Kuita kuti mudzidzi azvimiririre mukushandiswa kwemabasa ebasa ane chekudzidziswa mukugadzirwa kwemafashoni;
Kurudzira kubatanidzwa kwemudzidzi mukati mekambani maererano nebasa rakasarudzwa rekutarisa uye kuti, zvinoenderana neruzivo uye nehunyanzvi hwakaratidzwa;
Kurudzira kusimudzira kwemudzidzi zvinoenderana nezvinodiwa uye zvinodiwa muindasitiri yezvipfeko;
Ita kuti munhu akwanise kuita basa rake, kureva kuti murege, kubvira pakubatanidzwa mumusika wevashandi uye mumashandiro anodiwa, kuita mabasa uye kuita zviitiko zvinoenderana nebasa iri.
Kurudzira kubatanidzwa kwemunhu muhupenyu hwekushanda, kusanganisira kuburikidza neruzivo rwemusika musika vashandi pamwe neruzivo rwemamiriro ezvinhu maanotakura basa ravo raakasarudza;
Kurudzira kukura nekudzika kweruzivo rwehunyanzvi mumunhu;
Kurudzira kufamba kwehunyanzvi hwemunhu nekumubvumira kuti ape zviwanikwa zvekuita rake rake zvakanaka, kusanganisira kuziva kwehunyanzvi.
Iyo Paralegal Technology chirongwa chinodzidzisa vadzidzi nzira yekushanda nemavara zviri pamutemo, mitemo yekutsvagura komputa, pamwe nemutemo wematare uye dzidziso.
Nyanzvi uye maPalegals anoongorora nekududzira zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvepamutemo uye kubatana mukunyora matanho kana magwaro pakugadziriswa kwemafaira. Izvi zvinoda ruzivo uye hunyanzvi munzvimbo dzakasiyana siyana dzese dzinokakavara seari notarial mutemo, maitiro uye kunyorwa maitiro, nzira dzekutsvaga pamwe nekushandiswa kwemadhata nesoftware inoshandiswa mumunda kuita.
Chirongwa ichi zvakare chinogadzirira vadzidzi mabasa zvinosanganisira:
kuvhura nekutarisa marekodhi, kutariswa kwematareji evatengi, kugadzirira uye mutero wemitero yemitengo, manejimendi ematare ekutenda, gadziriro dzematare, nyaya yekuzorora, kutungamira musoro, kuunganidzwa kwemari, iyo ruzivo uye hunyanzvi mukushanda mashandiro uye mutemo mune yekutengesa uye mutemo wekambani nemutemo wekutonga.
Iye chiremba mukuru anoshanda mumabasa ekuchengeta vana anozogona kudzidzira basa rake nevatengi vese vekuchengeta vana muQuebec, mumarudzi ese ezvekuriritira vana. Iye kana anodzidziswa kuita mabasa ese ezuva nezuva anodikanwa kuzadzisa zvinodiwa nevana.
Wakabudirira kuita BLI Chirungu 8 kana BLI yechiFrench level 8
Uchapupu hwehuwandu hwemitauro (BLI level kana Official bvunzo)